किन बिग्रिन्छ महिनावारी ? महिनावारी हुँदा के के कुरामा ध्यान दिने ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
महिनावारि कुन उमेरबाट सुरु हुन्छ ?
– महिनवारिको सुरुवाती दिनहरुमा महिनावारी गडबडी हुनु एकदमै सामान्य हो तर उमेर बढ्दै जाँदा गडबडी धेरै कारणले हुने गर्द्छ। – तनाव,शारीरिक रूपमा अस्वस्थ, रगत को कमी, थाईराईडको गोलमाल, डिम्वाशयमा कुनै किसिमको रोगको कारण, जथाभावी औषधी सेवनको कारण ।
कपडाको प्रयोग एक्दमै उचित छ तर कपडा पायो भन्दैमा जुन पायो तेही चाँही प्रयोग गर्नुहुँदैन। यसको प्रयोग गर्दा एकदमै ध्यान दिनु पर्छ। नरम तथा धेरै सोस्ने शक्ति भएको सफा कपडाकोको प्रयोग गर्नुपर्द्छ। प्रयोग गरिसकेपछी कपडालाई एकदमै राम्रोसँग धोएर सफा गरेर, घाममा सुकाउनु पर्दछ र ईस्त्री गरेर अर्को पटकको लागि राख्नुपर्द्छ।
महिनावारिमा सरसफाईमा कसरी ध्यान दिने ?
– प्याड अथवा कपडा जम्ने हालत सम्म प्रयोग नगर्ने। – ३-४ घण्टा भन्दा लामो समय सम्म प्याड अथवा कपडाको प्रयोग नगर्ने। – हरेक पटक प्याड अथवा कपडा परिवर्तन गर्दा आफ्नो योनी सफा पानीले सफा गर्ने।
– सफा कपडाको मात्र प्रयोग गर्ने। – प्याड जथाभाबी नराखने, कागजमा बेरेर मात्र फयाकने
तर अधिक दुखाइ भएको खण्डमा महिनावारि मात्र नभएर अरु रोग पनि हुनसक्छन। यस्तो अवस्थामा नजिकको स्वास्थ्यसंस्थामा गएर चेकअप गराईहाल्नुपर्छ।
यो उसको डिम्वाशयवाट अण्डा कतिबेला निस्किरहेको छ भन्ने कुरामा भरपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा अण्डा निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ।
त्यसैले डिम्वाशयवाट अण्डा निस्कनु केहीदिन अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भाधारणको दृष्टिकोणले सुरक्षित काल मानिन्छ भने गर्भ नचाहिनेकोलागि असुरक्षित मानिन्छ।
महिनावारि कुन उमेरमा गएर बन्द हुन्छ? यो के को सङ्केत हो ?
(स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा नेपालकै प्रथम लेजर थेरापी विशेषज्ञ डा.सुशिला बैद्यसँगको अन्तर्वातामा आधारित )